एक जादुगरले धर्ती छाडेको दिन:: Naya Nepal
एक जादुगरले धर्ती छाडेको दिन
‘महान आत्माको कहिल्यै निधन हुँदैन। यसले बरू हामीलाई बारम्बार नजिक ल्याइरहन्छ।’
एप्पल कम्पनीका सिइओ टिम कुकले संस्थापक स्टिभ जब्सको सम्झनामा सोमबार ट्विट गरे- ‘तिमी सधैं हामीसँगै छौ। तिम्रो सम्झनाले हामीलाई सधैं प्रेरणा दिइरहेका हुन्छन्।’
अमेरिकाको क्यूपरटिनोस्थित नवनिर्मित ‘स्टिभ जब्स थिएटर’ को अँध्यारो हलमा स्टिभको यो आवाज गुञ्जिँदा खचाखच दर्शकले एक साथ लामो सास फेरेका थिए।
सयौं दर्शकको एकोहोरो श्वासप्रश्वासबीच स्टिभ भन्दै थिए, ‘हामी को हौं? हाम्रा निम्ति के महत्वपूर्ण छ? सत्य सधैं यही हुनुपर्छ। एप्पलमा हामी सबैको कोशिस नै यही हो। जसरी हामीले आफ्नो पहिचानबाट आफू हुनुको अर्थ दिन्छौं, एप्पलले त्यस्तै गर्छ र सधैं त्यही गरिरहनेछ।’
नयाँ आइफोन, घडी र टिभीको झलक हेर्न व्यग्र दर्शकको तालीध्वनि मत्थर नहुँदै टिमले भनेका थिए, ‘मलाई स्टिभको बोली सुन्न साह्रै मनपर्छ। यो थिएटर स्टिभले आफैं उद्घाटन गरेका भए बेस हुन्थ्यो।’
‘उनलाई नसम्झी बितेको कुनै दिन छैन,’ टिम भावुक सुनिए, ‘हामी आज र आगामी दिनको निम्ति जति तयारी गर्दैछौं, उनका सम्झना उति ताजा हुँदैछन्। स्टिभको जीवनदर्शन नै एप्पलको डिएनए हो।’
स्टिभको अन्तिम निगरानीमा बनेको ‘आइफोन–५’ आज हुर्केर ‘११’ सम्म पुगेको छ। यसपालि कोरोना महामारीका कारण तोकिएको मितिमा नयाँ आइफोन सार्वजनिक हुन सकेन। अरू उत्पादन आए पनि आइफोन-१२ अक्टोबर १३ मा सार्वजनिक हुने कुरा छ।
स्टिभको ‘अद्भूत’ सपनालाई पृथक बनाउँछ, उनको प्रतिभा र रनाहाले। उपभोक्ताका चाहना सुँघेर त्यसलाई पूरा गर्ने प्रयासमा कुनै कसर नछाड्ने रनाहा नै स्टिभ–स्वभावको अद्भूत विशेषता भएको उनका आत्मकथाकार वाल्टर इज्याक्सनले बताएका छन्।
स्टिभमा यही खुबी थियो, फरक–फरक बाजाको संगीतलाई एउटै ताल दिने र नयाँ धुन सिर्जने। यही खुबीकै कारण व्यक्तिगत कम्प्युटर र मोबाइलको डिजिटल रूपान्तरणको श्रेय उनलाई जान्छ। उनले सन् १९७६ मा क्यालिफोर्नियाको ग्यारेजबाट सुरू गरेको ‘एप्पल’ लाई संसारकै एक अग्रणी कम्पनीको हैसियतमा पुर्‍याए। उनले विश्वविद्यालयको डिग्री लिएनन्, तर डिग्री लिएका सयौं प्राविधिक टोलीलाई नेतृत्व दिए। उनीहरूलाई आफ्नो सपना देखाए र त्यसलाई पूरा गर्ने ‘क्रेज’ को सम्मोहन मन्त्र फुकिदिए।
उनी फोर्ड कार कम्पनीका संस्थापक हेनरी फोर्डका भनाइ सम्झँदै भन्थे, ‘म उपभोक्ता के चाहन्छन् भनेर हेर्दिनँ। म जे दिन्छु, त्यो उपभोक्ताको चाहना हुन्छ। आफूलाई के चाहिएको छ भनेर सोच्ने फुर्सद उपभोक्तालाई छैन, भए पनि उनीहरू हामीलाई भन्न आउँदैनन्। त्यसैले म यस्तो चिज दिन्छु, जो उनीहरूको चाहना बनोस्। उनीहरूको चाहना के हुनसक्छ भनेर पत्ता लगाउने काम भने हाम्रो हो।’
उनी भन्थे, ‘म उपभोक्तालाई नयाँ प्रविधि मात्र दिन चाहन्नँ, त्यो प्रविधिसँगै आत्मीयता पनि दिन चाहन्छु। हामी हुनुको कृतज्ञता उनीहरूसँग बाँड्न चाहन्छु।’
व्यक्तिगत जीवनमा उनी कतिसम्म ‘पर्फेक्सनिस्ट’ थिए भने, रेस्टुरेन्टमा मेनुको डिजाइन मन नपरेर फर्केका कयौं उदाहरण छन्। उनले आफ्नो घरमा फर्निचर प्रयोग विरलै गरे। कुनै पनि फर्निचरको डिजाइन स्टिभको निम्ति ‘पर्फेक्ट’ हुँदै भएन। हुँदाहुँदा जीवनको उत्तरार्द्धतिर त उनलाई आफू सुहाउँदो लुगा छान्नधरि समस्या भयो। उनी जतिन्खेरै कालो टिसर्ट र निलो जिन्स लगाएर हिँड्न थाले।
भनिन्छ, ह्वाइट हाउसले सुट–टाई लाउनुपर्ने आफ्नो ‘ड्रेस कोड’ मा एकचोटि मात्र सम्झौता गर्‍यो, स्टिभलाई आमन्त्रण गर्दा। उनी त्यहाँ पनि उही आफ्नो चिरपरिचित परिधानमै पुगेका थिए।
आफ्नो धर्मराएको र शान्त मनबारे स्टिभले वाल्टरलाई भनेका छन्, ‘म बुबासँग मेसिनको काम गर्थेँ। उहाँ धेरै पढेको हुनुहुन्नथ्यो, तर निकै बाठो हुनुहुन्थ्यो। विस्तारै मैले आफूलाई मेरा आमाबाबुभन्दा तेज र तीक्ष्ण ठान्न थालेँ। यो सोचले मलाई पछि निकै लज्जाबोध भयो। मैले आखिरमा बुझेँ, मेरा आमाबाबु निकै मायालु हुनुहुन्थ्यो। म उहाँहरूभन्दा अलग भए पनि मेरा निम्ति कुनै कसर बाँकी राख्नु हुन्नथ्यो। म उहाँहरूको ‘विशेष’ थिएँ। मेरा हरेक आवश्यकता पूरा गर्ने उहाँहरूमा तीव्र चाहना थियो।’
स्टिभका बाबु पर्ल जब्स कारको लकसम्बन्धी काम गर्थे। उनीहरू अमेरिकी इलेक्ट्रोनिक उद्योगको केन्द्र ‘सिलिकन भ्याली’ मा बस्थे। त्यहीँ हुर्के-बढेकाले स्टिभलाई सानैदेखि मेसिन र इलेक्ट्रोनिक सामानमा रूचि थियो।
उनी नयाँ उपकरण भेट्यो कि खोतलखातल पार्न व्यग्र हुन्थे। पाटपूर्जा खोल्थे, छर्थे, हेर्थे र आफैं जोड्थे। एकदिन हेव्लेट–प्याकर्ड (एचपी) कम्पनीको ‘फ्रिक्वेन्सी काउन्टर’ भन्ने उपकरण खोलखाल पार्दा उनले थाहा पाए, मेसिनमा एउटा पुर्जा छैन। उनले एचपीका सह–संस्थापक विलियम हेव्लेटलाई फोन गरे। स्टिभका कुरामा यति दम थियो, २० मिनेटको टेलिफोन वार्तामै हेव्लेट प्रभावित भए। उनले मेसिनमा नभएको पुर्जाको प्याकेट तुरुन्तै पठाइदिए।
इलेक्ट्रोनिक क्षेत्रमा पाइला हालेको यही कम्पनीमा स्टिभको भेट भयो, स्टेफेन वुजनेकसँग। स्टिभको प्रविधि लगावलाई दिशा दिनमा वुजनेक र उनकी आमाको भूमिका छ। आमाले सन् १९७१ सेप्टेम्बरमा वुजनेकलाई इस्क्वायर पत्रिकामा प्रकाशित ‘सिक्रेट्स अफ द लिटल ब्लु बक्स’ लेख पठाएकी थिइन्। त्यो लेख ‘फोनफ्रिक्स’ नामका युवाहरूबारे थियो, जसमा उनीहरूले अमेरिकी टेलिफोन प्रणालीका कमजोरी पत्ता लगाएर पैसै नतिरी कसरी कुराकानी गरिरहेका छन् भन्ने उल्लेख थियो।
सन् २००५ मा स्ट्यान्फोर्ड कलेजको दीक्षान्त समारोहमा भाषण दिँदा स्टिभले कलेज छाड्ने कारण बताएका थिए, ‘म पढ्न चाहन्थेँ, तर कलेज छान्ने मामिलामा आलोकाँचो रहेछु। मैले झन्डै स्ट्यानफोर्डजति नै महँगो कलेज छानेँ। आमाबाबुको कमाइ मेरो कलेजको शुल्क तिर्नमै सकिन थाल्यो। मलाई आमाबाबुले दुःख गरी कमाएको पैसा कलेज शुल्कमा मात्र खर्चिन व्यर्थ लाग्यो। यही सोचेर मैले ६ महिनामै कलेज छाडेँ।’
‘त्योबेला रिड कलेजमा क्यालिग्राफी पढाइ हुन्थ्यो। कलेजभरि टाँसिएका पोस्टरमा सुन्दर अक्षर हुन्थे,’ स्टिभले आफ्नो भाषणमा भनेका छन्, ‘क्यालिग्राफीमा मलाई रूचि थियो। म सुटुक्क त्यसको कक्षामा छिर्थेँ।’
त्यतिबेला क्यालिग्राफी कक्षा छिर्नुको फाइदा १० वर्षपछि भयो, जब उनी वुजनेकसँग मिलेर ‘म्याकिन्टोस’ कम्प्युटर बनाउँदै थिए। ‘क्यालिग्राफी ज्ञानबाट हामीले पहिलोपटक यस्तो कम्प्युटर बनाउन सक्यौं, जसमा टाइप गर्दा सुन्दर अक्षर देखिन्थे,’ उनको भाषणमा छ।
अठार महिना पोर्टल्यान्डमै यताउति घुमेपछि सन् १९७४ मा उनी आफ्ना आमाबाबुकै सहर सिलिकन भ्याली फर्के। त्यहाँ भिडियो गेम उत्पादक ‘अटारी’ मा उनको जागिर सुरू भयो, प्रतिघन्टा पाँच डलर पारिश्रमिक पाउने गरी।
‘आफ्नो देश फर्कंदा मलाई भारत जाँदाभन्दा बढी सकस भयो। त्यहाँको सँस्कृति नै अलग थियो,’ उनले आत्मकथामा भनेका छन्, ‘हामी बौद्धिक हिसाबले चल्छौं, उनीहरू अन्तरज्ञानले। मेरो विचारमा बौद्धिकताभन्दा अन्तरज्ञान धेरै शक्तिशाली छ, र यसले मेरो काममा निकै प्रभाव पारेको छ।’
‘उनी त्यसबेला हरे कृष्ण भन्दै हिँड्ने मान्छेजस्ता देखिएका थिए। तर, मलाई उनको त्यो चाल मनपर्‍यो,’ अटारीका प्रमुख इञ्जिनियर अल अर्लकोनले भनेका छन्।
‘यो मेरो जीवनकै सबभन्दा राम्रो प्रस्ताव थियो। मान्छेले साँच्चै नै प्रयोग गर्न सक्ने गेम डिजाइन गर्नु। तर, मलाई यो काम गर्न सक्दिनँ कि भन्ने लाग्यो। स्टिभ नै थिए, जसले मलाई आत्मबल दिए,’ वुजनेकले स्टिभका आत्मकथाकार वाल्टरलाई भनेका छन्, ‘स्टिभ हार मान्नेमध्ये छँदै थिएनन्।’
‘म अझै सम्झन्छु, स्टिभमा एक किसिमको रनाहाको महल थियो,’ होमब्रिउका सदस्य कम्प्युटर डिजाइनर ली फेल्सेनस्टिनले भनेका छन्, ‘उनी कुनै बैठक, कुनै अन्तर्क्रिया छुटाउँथेनन्। सबैका कुरा सुन्न चाहन्थे।’
र, यहीँबाट सुरू भयो एकछेउ टोकेको र बाँकी आफैं टोकुँटोकुँ लाग्ने लोगोसहितको नयाँ कम्पनी ‘एप्पल’, जसले डिजिटल प्रविधिको मुहारै फेरिदियो।
सन् १९८३ सम्ममा एप्पल यस्तरी चम्कियो, संसारकै धनी कम्पनीहरूको सूची ‘फर्च्युन ५००’ मा नाम लेखाउन सफल भयो। यति कम समयमा यो सूचीमा पर्ने एप्पलबाहेक सायदै कुनै कम्पनी थियो।
लिसा नामसँग स्टिभको व्यक्तिगत जीवन जोडिन्छ। भलै उनले प्राविधिक शब्दावली ‘लोकल इन्टिग्रेटेड सफ्टवेयर आर्किटेक्चर’ का पहिला अक्षर जोड्दै ‘लिसा’ शब्द बनाए, त्यो नाम स्टिभकी आफ्नै छोरीको हो।
स्टिभको जीवनमा सन् १९७९ को एउटा घटनाले ठूलो प्रभाव पार्‍यो, जब उनी विश्वप्रसिद्ध फोटोकपी मेसिन उत्पादक ‘जेरोक्स’ को क्यालिफोर्निया, पालोअल्टोस्थित अनुसन्धान केन्द्र घुम्न गए।
स्टिभ अधैर्य भए। उनलाई लाग्यो, ‘यो प्रणाली सुनखानी हो, जसमाथि जेरोक्स मस्त सुतेको छ। यसलाई बाहिर ल्याउने हो भने आधुनिक डेस्कटप कम्प्युटरमा ठूलो परिवर्तन आउन सक्छ।’
अल्टो ग्राफिकल भिडिओ डिस्प्ले भएको त्यो कम्प्युटर प्रणाली एउटा सानो यन्त्रबाट चल्थ्यो, जसलाई आज हामी ‘माउस’ भनेर चिन्छौं।
‘त्यो प्रणाली हेरेको १० मिनेटमै कुनै दिन संसारका सबै कम्प्युटर यस्तै हुनेछन् भन्ने मलाई महशुस भएको थियो,’ सन् १९९५ मा स्मिथसोनियन इन्स्टिच्युसनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा स्टिभले भनेका थिए, ‘पालोअल्टो अनुसन्धान केन्द्रको त्यो भ्रमण मेरो जिन्दगीमा परिवर्तन ल्याउने सबभन्दा महत्वपूर्ण घटना हो।’
पेप्सीकोला कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी स्कल्लीलाई पहिलो भेटमै स्टिभले भनेका थिए, ‘तिमी जिन्दगीभरि चिनी घोलेको पानी बेचेर बस्न चाहन्छौ कि यो संसार परिवर्तन गर्ने अभियानमा सरिक हुन चाहन्छौ?’
एप्पल छाडेकै वर्ष सेप्टेम्बर महिनामा स्टिभले नयाँ कम्पनी सुरू गरे, ‘नेक्स्ट इन्क’।
कम्प्युटर–एनिमेसन फिल्म बजार सानो भएकाबेला १९९५ मा पिक्सार र वाल्ट डिज्नीले ‘टोय स्टोरी’ एनिमेसन फिल्म रिलिज गरे। फिल्मको बक्स–अफिस कमाइ ३६ करोड डलर नाघ्यो।
उनी आफूलाई ‘त्याग्ने’ आमा चिन्न चाहन्थे। उनले एक जासुससम्म खटाए, जसले केही पत्ता लगाउन सकेन। उनले आफ्नो कानुनी अभिभावक छान्ने डाक्टर खोजे। ती डाक्टरले सुरूमा केही भनेनन्। तर, आफू मरेपछि स्टिभ जब्सलाई दिनू भनेर उनले एउटा पत्र आफ्नी श्रीमतीलाई थमाएका रहेछन्। डाक्टरको मृत्यु भएको केही दिनपछि स्टिभले त्यो पत्र पाए, जसमा लेखिएको थियो– ‘तिम्री आमाको नाम जोएन स्किबल हो।’
नयाँ पुस्ताको अपरेटिङ सिस्टम ल्याउने प्रयासमा असफल भएकै बेला एप्पलको डोरी गिलबर्ट एमेलियोको हातमा पर्‍यो। उनले एप्पलका ‘पिता’ स्टिभसँग सहकार्यको हात बढाए। सन् १९९६ मा एप्पलले ४३ करोड डलरमा नेक्स्ट कम्पनी किन्यो। अर्को वर्ष स्टिभ परामर्शदाताका रूपमा एप्पल फर्के। र, त्यसको तीन वर्षपछि फेरि प्रमुख कार्यकारी भए।
एप्पलको दोस्रो ‘इनिङ’ मा स्टिभ इलेक्ट्रोनिक उपकरण उत्पादनतर्फ केन्द्रित भए। आइट्युन्स र आइपड प्लेयरको सफलतासँगै इन्टेल प्रोसेसरमा आधारित म्याकिन्टोस कम्प्युटरले एप्पललाई उचाइमा पुर्‍यायो।
टिमले तीन वर्षअघि आइफोन–८, ८ प्लस र टेन सार्वजनिक गर्दै भनेका थिए, ‘स्टिभ जिनियस थिए, अलौकिक। नयाँ पुस्तालाई परिवर्तनकारी उपकरणको स्वाद चखाउने खुबी उनमा थियो। उत्प्रेरणाका उनी खानी थिए, कहिल्यै नसकिने, कहिल्यै नथाक्ने। उनको ‘भिजन र प्यासन’ एप्पलमा सधैं रहनेछ, सधैं नै।’
सायद यही डिएनए सम्झेर टिमले भनेका थिए, ‘एउटा महान आत्माको कहिल्यै निधन हुँदैन। यसले बरू हामीलाई बारम्बार नजिक ल्याइरहन्छ।’